कस्ता छन् विश्वकप फुटवल खेल्ने राष्ट्रहरु ? (नागरिक दैनिक) | Sima Pari
Home / Featured News / कस्ता छन् विश्वकप फुटवल खेल्ने राष्ट्रहरु ? (नागरिक दैनिक)
कस्ता छन् विश्वकप फुटवल खेल्ने राष्ट्रहरु ? (नागरिक दैनिक)
Posted by: Rishi Acharya in Featured News, PaperPublished, Sports Leaveacomment
पेरिस– विश्व फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगिता सुरु हुन सात महिना पनि पूरा बाँकी छैन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चटारो, देशभित्र व्यापक विरोधलगायतका चुनौती सामना गर्दै पाँच पटकको कीर्तिमानी विजेता ब्राजिल विश्वकप आयोजनाका लागि तयार हुने क्रममा छ। प्रतियोगिताका लागि विश्व फुटबलको सर्बोच्च निकाय फिफाका २ सय ८ सदस्य राष्ट्रबाट अन्तिम चरणका लागि छानिएका ३२ टोलीको टुंगो लागिसकेको छ। फिफाले आठ टोलीलाई शीर्ष वरियता प्रदान गर्ने तथा बाँकी २४ टोलीलाई तीन फरक पटमा बाढने काम गरिसकेको छ। अव समूह छुट्याउन शनिबार बिहान अन्तिम ‘ड्र’ हुनेछ। अन्तिम ‘ड्र’ का लागि उपलब्ध ३२ टोली कसरी यहाँसम्म आइपुगे? फिफाको विश्व वरियताक्रममा उनीहरुको स्थान के छ? एएफपीले तयार गरेको सबै सहभागी ३२ टोलीको छोटो परिचय :
प्रशिक्षक– भाहिद हालिहोड्जिकप्लेअफमा बुर्किना फासोलाई अवे गोलपद्दतिमा पछि पार्दै ब्राजिल यात्राको टिकट काटेको अल्जेरियाको लागि यो चौथो विश्वकप सहभागिता हुनेछ। यसै वर्षको पूर्वार्द्धमा सम्पन्न अफ्रिका कप अफ नेशन्सको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको अल्जेरियाले पछिल्ला तीनै सहभागितामा विश्वकपको समूह चरण पार गर्न सकेको थिएन। यसपाली ब्राजिलमा पनि २६ औं वरियताप्राप्त अल्जेरियाको यात्रा सहज नहुने अनुमान गरिएको छ। बोस्नियाका भेट्रान प्रशिक्षक हालिहोड्जिकसँग ब्राजिलमा धेरै परिचित स्टारको साथ हुनेछैन्। हालिहोड्जिकको नेतृत्वमा आइभोरी कोस्टले २०१० को विश्वकपमा स्थान पक्का गरे पनि दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गर्नुअघि उनी बर्खास्तगीमा परेका थिए। हालिहोड्जिकको टोलीमा कप्तान माडजिद बौघेराले रक्षापंक्तिबाट टोलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्नेछन् भने भ्यालेन्सियाका सोफियाने फेघौली र इन्टर मिलानका इशाक बेल्फोडिलजस्ता फरवार्ड उनले विश्वास गर्न सक्ने खेलाडी हुन्।
प्रशिक्षक– एलेसान्द्रो साबेला
छनोट चरणमा दक्षिण अमेरिकी प्रतियोगितामा दुई अंकको अग्रताका साथ शीर्ष स्थान हासिल गर्दै अर्जेन्टिनाले ब्राजिल यात्रा पक्का गरेको थियो। छनोट चरणमा दुई खेलमात्र हारेको टोलीले कोलम्बियालाई दुई अंकले पछि पारेको थियो। विश्वकपमा स्थान पक्का गरिसकेपछि अन्तिम खेलमा टोली उरुग्वेसँग पराजित भएको थियो। १९७८ र १९८६ को विश्वकप विजेता टोली फिफा विश्व वरियताको तेस्रो स्थानमा छ। विश्व वर्ष खेलाडी लियोनेल मेसीको प्रेरणामा रहने अर्जेन्टिनासँग सर्जियो अग्विरो, गोन्जालो हिग्विन र एन्जेल डी मारियाजस्ता फरवार्डको साथ रहनेछ। तेस्रो विश्वकप उपाधिको लक्ष्यमा रहेको टोलीले यसपालीको विश्वकपलाई राम्रो मौकाका रुपमा लिएको छ।
प्रशिक्षक– एन्गे पोस्टेकोग्लु
अस्ट्रेलिया समग्रमा चौथो विश्वकपका लागि ब्राजिलयात्रामा निस्कदैछ। यो टोलीको लगातार तेस्रो सहभागिता हो। जर्मन प्रशिक्षक हल्गर ओसिइकको नेतृत्वमा रहँदा एसियाली छनोट प्रतियोगितामा ५९ औं वरियताको अस्ट्रेलियाले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। टोली आठ खेलमा तीन जितमै सीमित भएको थियो। छनोटका क्रममा अक्टोबरमा फ्रान्ससँग खेलिएको मैत्रीपूर्ण खेलमा ६–० को पराजय भोगेपछि ओसिइक बर्खास्त भएका थिए। उनलाई पोस्टेकोग्लुले स्थानान्तरण गरेका थिए। टोलीका भेट्रान गोलकिपर मार्क स्वार्नर भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट विदा भएका छन्। तर, बायर लेभरकुसनका रोबी क्रुसबाट टोलीले ठूलो आशा राखेको छ।
प्रशिक्षक – मार्क विल्मोट्स
फिफा विश्व वरियताक्रमको ११ औं स्थानमा रहेको बेल्जियमले यसपाली विश्वकपमा उच्च प्रदर्शनको आशा राखेको छ। एसियाली भूमिमा २००२ मा सम्पन्न विश्वकपपछि बेल्जियमको यो पहिलो सहभागिता हो। १९९४, १९९८ र २००२ को विश्वकप खेलेका विल्मोट्सको नेतृत्वमा युरोपका शीर्ष लिगका मुख्य खेलाडी सम्मिलित टोलीले छनोट चरणमा एउटै खेल नहारी ब्राजिलको यात्रा तय गरेको थियो। भिन्सेन्ट कोम्पनीको नेतृत्वमा टोलीको सेन्ट्रल डिफेन्स रहेनछ भने मारौने फेलाइनी मिडफिल्ड तथा इडेन हाजार्ड,रोमेलु लुकाकु र क्रिस्टियन बेन्केटेजस्ता खेलाडी आक्रमणमा रहँदा बेल्जियमको अपेक्षा उच्च छ। तर, १९८६ मा चौथो स्थान हासिल गर्नुको उच्च प्रदर्शनको बराबरी गर्नु भने टोलीको ठूलो चुनौती हुनेछ।
प्रशिक्षक– साफेट सुसिक
स्वतन्त्रता हासिल गरेको दुई दशक नवित्दै बोस्नियाले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको छ। ब्राजिल विश्वकपमा सहभागिता जनाउनेमध्ये बोस्नियाको यो पहिलो पटक हो। युगोस्लाभियाका लागि १९८२ र १९९० को विश्वकप खेलेका सुसिकको नेतृत्वमा बोस्निया पहिलो पटक विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगितालाई छनोट भएको हो। चार वर्षअघिको विश्वकप तथा दुई वर्षअघिको युरोपियन च्याम्पियनसिप छनोटको प्लेअफमा बोस्निया पोर्चुगलसँग दुवै लेगमा पराजित भएको थियो। फिफा विश्व वरियताक्रमको २१ औं स्थानमा रहेको बोस्नियाले छनोट चरणमा ग्रिसलाई गोलअन्तरमा पछि पार्दै सोझै छनोट भएको थियो। १० खेलमा ३० गोल गरेको टोलीको आक्रमणमा म्यानचेस्टर सिटीका इडिन जेको र स्टुटगार्टका भेडाड इबिसेभिकसँगै क्रिएटिभ मिडफिल्डरद्धय जाभ्जेडान मिसिमोभिच र मिरालेम प्जानिकको साथ महŒवपूर्ण थियो।
प्रशिक्षक– लुइस फिलिप स्कोलारी
फिफा विश्व वरियताक्रमको १० औं स्थानमा रहेको ब्राजिल आयोजकका नाताले सोझै आसन्न विश्वकपलाई छनोट भएको हो। पछिल्लो पटक १९५० मा विश्वकप आयोजना गर्दा उपविजेतामा सीमित भएको टोलीलाई यसपाली घरेलु मैदानमा त्योभन्दा माथिल्लो सफलता हासिल गर्ने चुनौती हुनेछ। कमजोर प्रदर्शनका कारण ब्राजिलले गतवर्ष प्रशिक्षक मानो मेनेजेजलाई शर्खास्त गर्दै २००२ को विश्वकप विजेता टोलीका प्रशिक्षक स्कोलारीलाई नै पुनरागमन गराएको थियो। स्कोलारीकै नेतृत्वमा टोलीले यसैवर्षको पूर्वार्द्धमा सम्पन्न अन्तरमहादेशीय कप फाइनलमा स्पेनलाई ३–० ले हराउँदै उपाधिमा कव्जा जमाएको थियो। पाँच पटकको पूर्व विजेता ब्राजिलले यसपाली टोलीमा नेइमार र थियागो सिल्भाको प्रेरणा पाउने सम्भावना छ।
प्रशिक्षक– भल्कर फिन्के
जर्मनीका भेट्रान भल्कर फिन्केले मे महिनामा अफ्रिकाली छनोट प्रतियोगिता दौरान क्यामरुनी टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। गतमहिना ट्युनिसियामाथि प्लेअफमा ४–१ को विजय हासिल गर्दै ५१ औं वरियताको टोलीले ब्राजिलको टिकट काटेको थियो। फिन्केको नेतृत्वमा क्यामरुनले सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि टोलीसामु अझै १९९० मा क्वाटर फाइनल पुगेको उपलब्धीको बराबरी गर्ने चुनौती छ। निकोलस एनकोलोउ र एलेक्स सङजस्ता स्टार खेलाडी भएको टोलीमा सामुइल इटो कप्तानीका लागि फर्किएका छन्। जसले टोलीको आशा बढाएको छ।
प्रशिक्षक– जर्ज साम्पाओली
जर्ज साम्पाओलीले आफ्नै देश अर्जेन्टिनाका क्लाउडियो बोर्घीलाई स्थानान्तरण गर्दै गतवर्ष चिलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। दक्षिण अमेरिकी छनोट प्रतियोगितामा १५ औं वरियताको चिलीले साम्पाओलीको नेतृत्वमा पाँच जित र एक बराबरी हासिल गर्दै अर्जेन्टिना र कोलम्बियापछि तेस्रो स्थानमा रहेर ब्राजिललाई छानिएको थियो। चिलीको विश्वकप आशामा युभेन्ट्सका आर्टुरो भिडाल र बार्सिलोनाका एलेक्सिस सान्चेज मुख्य स्टार हुन। भर्खरै वेम्बलीमा सम्पन्न मैत्रीपूर्ण खेलमा घरेलु टोली इङल्यान्डलाई हराएर चिलीले विश्वकपमा उच्च प्रदर्शन गर्ने संकेत गरेको छ।
प्रशिक्षक – जोस पेकरम्यान
दक्षिण अमेरिकाबाट आउदो वर्ष हुने विश्वकपलाई कोलम्बिया आरामदायी पारामा छनोट भएको थियो। राउन्ड रोविन छनोट प्रतियोगितामा कोलम्बिया अर्जेन्टिनापछि दोस्रो स्थान हासिल गर्दै ब्राजिललाई छानिएको थियो। फिफा विश्व वरियताक्रमको चौथो स्थानमा रहेको कोलम्बिया फ्रान्समा सम्पन्न विश्वकप १९९८ पछि पहिलो पटक विश्व फुटबलको सबभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा छनोट भएको हो। अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक पेकरम्यानले राडामेल फाल्काओ, कार्लोस बाका, जेम्स रोडरिग्वेेज र ज्याक्सन मार्टिनेजजस्ता स्टार खेलाडीहरुको समूहलाई आकर्षक फुटबलका लागि तयार पारेका छन्। जर्मनीमा आठ वर्षअघि सम्पन्न विश्वकपमा आफ्नै देशलाई क्वाटर फाइनलसम्म पुर्‍याएका पेकरम्यानको नेतृत्वमा कोलम्बियाले उच्च प्रदर्शन गर्दै वरियतामा चौथो स्थान हासिल गरेको हो। जसका कारण टोलीबाट विश्वकपमा उच्च प्रदर्शन आशा गरिएको छ।
प्रशिक्षक– जर्ज लुइस पिन्टो
फिफा विश्व वरियताक्रमको ३१ औं स्थानमा रहेको कोस्टारिकाले कन्काकाफ क्षेत्रको छनोटमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थान हासिल गर्दै विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा चार वर्षअघि सम्पन्न विश्वकप २०१० मा कोस्टा रिका छनोट हुन असफल भएको थियो। फुलह्यामका फरवार्ड ब्रायन रुइजको कप्तानीमा रहने टोलीले समूह चरण पार गर्ने आशा गरिएको छ। कोलम्बियाली प्रशिक्षक पिन्टो मध्य अमेरिकी क्षेत्रका लागि परिचित व्यक्तित्व हुन्। पछिल्लो दशकमा यो क्षेत्रमा क्लब फुटबलमा उच्च सफलता हासिल गरेका उनले विश्वकप २००६ को छनोट चरणमा पनि कोस्टा रिकाको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
प्रशिक्षक– निको कोभाक
४० लाखमात्र जनशंख्या भएको क्रोएसिया अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा लगातार प्रभाव जमाउन सफल देश हो। फ्रान्समा सम्पन्न १९९८ विश्वकपमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको टोली युरोपियन च्याम्पियनसिपमा दुई पटक अन्तिम ८ पुगेको थियो। क्रोएसियाको वर्तमान टोलीमा लुका मोडरिक, इभान राकिटिक र मारियो मान्ड्जुकिकजस्ता खेलाडीको साथ छ। तर, आइसल्यान्डविरुद्धको निर्णायक प्लेअफमा वायर्न म्युनिखका स्ट्राइकर मान्ड्जुकिकले रातो कार्ड सामना गरेका कारण विश्वकपको पहिलो खेलमा उनी प्रतिवन्धित हुनेछन् । फिफा विश्व वरियताक्रमको १६ औं स्थानमा रहेको क्रोएसियाको अर्को मुख्य चिन्ताको विषय भनेको पछिल्लो समयको कमजोर फर्म हो। छनोटको समूह चरणमा बेल्जियमभन्दा पछि परेर उपविजेतामा सीमित भएपछि टोली प्लेअफमा धकेलिएको थियो।
प्रशिक्षक– रेइनाल्डो रुइडा
इक्वेडर तेस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको हो। उरुग्वलेलाई गोलअन्तरमा पछि पार्दै इक्वेडर स्वतः छनोट हुने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हो। फिफा वरियताको २३ औंे स्थानमा रहेको रेइनाल्डो रुइडाको टोलीले विश्वकप छनोटका क्रममा घरेलु मैदानमा उच्च प्रदर्शन गर्‍यो। तर अवेमा टोलीको प्रदर्शन कमजोर रह्यो। क्योटोबाहेक सबै अवे खेल हारेपनि टोली दक्षिण अमेरिकाको शीर्षस्थानका रह्यो। गत जुलाईमा स्ट्राइकर चुचो बेनिटेजको असामयिक निधनले टोली स्तब्ध बन्यो। तथापी शोकलाई शक्तिमा बदल्दै टोली अर्को बर्ष ब्राजिलमा दरिलो चुनौति पेश गर्नेलक्ष्यका साथ जानेछ। टोलीमा म्यानचेस्टर युनाइटेडका विङ्गर एन्टोनियो भ्यालेन्सिया, स्ट्राइकर फिलिपि काइसिडो रहनेछन्। कोलम्बियन प्रशिक्षक रुइडाले सन् २०१० ले होन्डुरसलाई विश्वकपमा पुर्‍याएका थिए।
प्रशिक्षक – रोय हड्सन
इङ्ल्यान्ड अपराजित रहँदै ब्राजिल विश्वकपका लागि छनोट भएको थियो। छनोटका क्रममा मात्र इङ्ल्यान्डले ३१ गोल गरेको थियो। सन् १९६६ को विजेता इङ्ल्यान्ड पछिल्ला चार वटा विश्वकपमा कम्तीमा अन्तिम १६ मा पुग्न सफल भएको छ। अहिले टोलीका लागि मुख्य चिन्ताको विषय भनेको पहिलो रोजाइका जोए हार्टको खराब फर्म हो। चिल्ली र जर्मनीसँगका पछिल्ला दुई मैत्रीपूर्ण खेल गुमाएपछि प्रशिक्षक हड्सनको तनाब पक्कै केही बढेको छ। कारण उनको टोलीले ब्राजिलमा विश्वकै उत्कृष्ट टोलीको सामना गर्नुपर्नेछ। यद्दपी फिफा वरियताको १३ औं स्थानमा रहेको टोलीका साथमा अहिले पनि स्तरीय खेलाडी छन्। वायने रुनी, डानियल स्टुरेज फरवार्ड लाइनमा छन् भने आर्सनलका ज्याक विलसेयरले मिडफिल्डमा प्रभाव जमाउने अपेक्षा गरिएकोछ।
प्रशिक्षक – डिडियर देसच्याम्पस
विश्वकप एवंम् युरोपियन च्याम्पियन स्पेन सम्मिलित छनोट चरणमा दोस्रो स्थानमा रहेपछि फ्रान्सले विश्वकप छनोटका लागि प्ले अफ खेल्नु परेको थियो। प्ले अफको पहिलो लेलमा युक्रेनसँग २–० को हारपछि फ्रान्सले पहिलो पटक विश्वकप गुमाउँने खतरा बढेको थियो। तर घरेलु मैदानमा टोलीले उच्च स्तरीय प्रदर्शन गर्‍यो। जहाँ टोली ३–० ले जित हासिल गर्दै फिफा वरियताको १९ स्थामा रहेको टोलीले ब्राजिलको यात्रा पक्का पार्‍यो। फ्रान्सले सन् १९९८ मा विश्वकप र २००० मा युरो कप जित्दा कप्तान रहेका देसच्पाम्पसले अहिले युवा खेलाडी अघि बढाउनेमा केन्द्रित छन्। राफेनल भारेने र पाउल पोग्बा जस्ता युवा प्रतिभाशाली खेलाडीसँग फ्रान्क रिबेरी र करिम बन्जिमा जस्ता खेलाडी फ्रान्सेली टोलीमा छन्। २०१६ मा घरेलु मैदानमा हुने युरो कपलाई लक्षित गरेर टोलीले ब्राजिलमा उच्च प्रदर्शनको प्रयास गर्नेछ।
प्रशिक्षक – जोचिम लोय
सन् २००६ मा घरेलु मैदानमा भएको विश्वकपमा जर्मनी तेस्रो भएको थियो। त्यसयता लोयको नेतृत्वमा रहेको जर्मनीले बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेपनि टोली उपाधि उचल्नबाट असफल रहँदै आएको छ। २००८ को युरो कपमा उपविजेता बनेको जर्मनी २०१० को विश्वकप र २०१२ को युरो कपमा समेफाइनलभन्दा अघि बढ्न सकेन। फिफा वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेको जर्मनी अर्को बर्ष ब्राजिलमा यसअघिका असफलतालाई विर्सदै अघि बढ्ने लक्ष्यका साथ उत्रने अपेक्षा गरिएको छ। यसपटको विश्वकप यात्रा टोलीको सहज रह्यो। छनोटमा मात्र २ अंक गुमाएको टोलीले १० खेलमा ३६ गोल गरेको थियो। तीन पटकको विश्वकप विजेतासँग फरवार्डलाइनमा थ्रुपै विकल्प छन्। जसमा मारियो गोटेज, मार्को रिउस, थोमस मुलर, जुलियन ड्राक्स्लर छन्। जर्मनीको रक्षापक्तिमा समस्या रहेको मानिन्छ। यद्दपी टोलीसँगै विश्वकै उत्कृष्ट मध्येका एक गोलकिपर म्यानुल नेयुरको दरिलो साथ रहनेछ।
प्रशिक्षक –केविसी एपिह
घाना तेस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको थियो। यसपटक टोलीले प्ले अफमार्फत विश्वकपको यात्रा सुनिश्चित गरेको हो। प्लेअफमा समग्रमा इजिप्टलाई ७–३ ले हराउँदै घानाले ब्राजिलको टिकट पक्का गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा भएको अघिल्लो विश्वकपमा टोलीले क्वार्टरफाइनलसम्म प्रवेश गर्दै सम्झनायोग्य प्रदर्शन गरेको थियो। अन्तिम आठको प्रतिस्पर्धामा टोली उरुग्वेसँग पेनाल्टीमा पराजित भएको थियो। ब्राजिल विश्वकपलाई लक्षित गर्दै प्रशिक्षक एपिहले केही परिचित अनुहारलाई टोलीमा स्थान देखिएका छन्। आसामोह ग्यान र माइकल इसियन अहिले पनि टोलीमा छन् भने एवि दाजुभाई आन्द्रे र जोर्डन पनि समेटिएका छन्। सन्यासको घोषणा जर्मनमा जन्मिउका केभिन प्रिन्स बोयटेङ पनि टोलीमा फुर्केका छन्। फिफा वरियताको २४ औं स्थानमा रहेको घाना यो बर्षको अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको सेमिफाइनल सम्म पुगेको थियो।
प्रशिक्षक – फर्नान्डो सान्तोष
सन् २००४ को युरोप च्याम्पियन ग्रिसले प्ले अफमा पुगेर विश्वकपका लागि स्थान सुरिक्षत पारेको थियो। समूह चरणमा बोसिनिय हर्जनगोभिनासँग गोलअन्तरमा पछि परेपछि टोलीले प्ले अफ खेल्नु परेको थियो। प्ले अफमा रोमानियालाई हराउँदै टोली अघि बढेको थियो। छनोटमा चरणमा टोलीले न धेरै गोल खायो न धेरै गोल गर्न सक्यो। कठिन संघर्षपछि विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेपनि फिफा वरियतामा १२ औं स्थानमा रहेको टोलीको इतिहास बलियो छैन। यसअघिका दुईपटकको सहभागितामा ग्रिस समूह चरणबाट अघि बढ्न सकेको छैन। पोर्चुगाली सान्तोषको नेतृत्वमा यसपटक भाग्यशाली हुने आशा गरिएको छ।
प्रशिक्षक – लुइस फर्नान्डो स्वारेज
मेक्सिको भन्दा ४ अंक बढी जोड्दै होन्डुरस कनकाकाफबाट विश्वकपका लागि स्वतः छनोट भएको थियो। समूह चरणमा मेक्सिकोविरुद्धको अवे खेल जित्नु टोलीका लागि ठुलो उपलब्धी थियो। ८० लाख जनसंख्या भएको मध्य अमेरिकन होन्डुरस लगातार दोस्रो र समग्रमा तेस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको हो। कोलम्बियन रेनाल्डो रियुडाले होन्डुरसलाई अघिल्लो विश्वकपमा छनोट गराएका थिए। उनको पथ पछ्याउँदै स्वारेज टोलीलाई अघि बढाउन सफल भएका हुन्। फिफा वरियताको ४१ औं स्थानमा रहेको टोलीमा युरोपियन फुटबलको अनुभव बटुलेका सेल्टिकका इमिलियो इजागुइरी र स्टोक सिटीका विल्सन पालासियोस् छन्।
प्रशिक्षक – कार्लोस कुइरोज
एसियाली शीर्षवरियताको इरानले छनोट चरणको अन्तिम दुई खेलमा दक्षिण कोरिया र उज्वेकिस्तानलाई हराउँदै ब्राजिल यात्रा पक्का पारेको थियो। विश्व वरियतामा ४५ औं स्थानमा रहेको इरान चौथो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको हो। कुइरोजको नेतृत्वमा रहेको टोली सन् २००६ यता पहिलो पटक विश्व फुटबलको कुम्भमेलामा स्थान सुरक्षित भएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा भएको विश्वकपमा कुइरोजले आफ्नो देश पोर्चुगललाई अन्तिम १६ सम्म पुर्‍याएका थिए। उनले अहिले घरेलु फुटबलमा उच्च प्रदर्शन गरिएका खेलाडीलाई टोलीमा समेटेका छन्। स्पेनिस क्लब ओसासुनाका पूर्व खेलाडी जाभेद नेकोनामले कप्तानीमा रहेको इरानी टोली फुलह्यामबाट खेल्दै आएका मिडफिल्डर आशकान डेजागा टोलीका परिचित अनुहार हुन्। यसपटक पनि टोलीले समूह चरणबाट अघि बढ्नका लागि भरपुर प्रयास गर्नेछ।
प्रशिक्षक – सिसारे प्रान्डेली
युरो कप २०१२ को उपविजेता इटाली अपराजित रहँदै विश्वकपका लागि छनोट भएको थियो। टोली फुटबलको सबैभन्दा ठुलो प्रतियोगिताका लागि छनोट भएको यो लगातार १४ औं पटक हो। प्रशिक्षक प्रन्डेलीको नेतृत्वमा केही बर्षयता इटालीले उच्च स्तरको प्रदर्शन गरिरहेको छ।
२०१० मा विश्वकपमा टोलीको प्रदर्शन निकै कमजोर रह्यो। विश्वकै बलियो राष्ट्रमध्ये एक इटाली त्यति बेला समूह चरणबाटै बाहिरीएको थियो। त्यसपछि प्रान्डेलीले कमान सम्हालेका थिए। प्रान्डेली युभेन्ट्सबाट निकै प्रभावित रहेको मानिन्छ। ३५ औं बर्षमा प्रवेश गर्ने क्रममा रहेको भेट्रान आन्द्रे पिर्लोलाई अहिले पनि मिडफिल्डमा टोलीमा रहनुलाई त्यसैको प्रभाव मानिन्छ। यद्दपी पिर्लो मिडफिल्डमा शसक्त मानिन्छन्। फिफा वरियताको सातौं स्थानमा रहेको इटालीले पाँच पटक विश्वकप जित्ने ब्राजिलको कीर्तिमानलाई यसपटक बराबरी गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर त्यसका लागि प्रान्डेलीका मुख्य हतियार मारियो बालोटेलीको प्रदर्शन उच्च रहन आवश्यक छ। अर्का प्रभावशाली फियोरेन्टिनाका स्ट्राइकर गिसेपी रुसी पनि छिटै फिट भए टोलीलाई फाइदा पुग्ने आशा गरिएको छ।
प्रशिक्षक – सब्री लामोउची
फ्रान्सेली पूर्व खेलाडी सब्री लामोउचीले आफुलाई सफल प्रशिक्षकका रुपमा प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको मानिन्छ। यद्दपी समूह चरणमा उनको टोली अपराजित रहेको थियो। त्यसका वावजुद टोलीले विश्वकपका लागि छनोट हुन प्ले अफमा सेनेगललाई पाखा लगाउँनु परेको थियो। प्ले अफका केही क्षण निकै महत्वपूर्ण थिए। प्ले अफ पार गर्दै विश्व वरियताको १७ औं टोली तेस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको थियो।
सन् २००६ र २०१० को विश्वकपमा कठिन समूहमा परेका कारण अघि बढ्न नसकेको आइभरी कोस्ट यसपटक नकआउट चरणमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वर्णिम पुस्ता मानिएको टोलीका दुई ठुला स्टारका लागि सम्भवत यो अन्तिम विश्वकप हुन सक्छ। डिडिएर ड्रोग्बा र याया टुउरे जस्ता विश्वस्तरी खेलाडी सिम्मिलित टोली गत बर्ष अफ्रिका कप अफ नेसन्सको फाइनलमा नाइजेरियासँग पराजित भएको थियो। टोलीका युवा प्रतिभा सेर्गे ओरिस र विलफ्रिड बोनीले पनि ब्राजिलमा धेरैको नजरमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रशिक्षक – अर्ल्बेटो जाचिरोनी
जापान लगातार पाँचौं पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको राष्ट्र हो। पछिल्ला केही महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका कारण जापानबाट विश्वकपमा पनि त्यसैको निरन्तरता दिने आशा गरिएको छ। फिफा वरियताको ४८ औं स्थानमा रहेको जापान पछिल्लो विश्वकपमा अन्तिम १६ सम्म पुगेको थियो। अर्को बर्ष टोली एसिया कप विजेता बनेको थियो। एसी मिलानका पूर्व प्रशिक्षक जाचिरोनीको नेतृत्वमा टोलीको मिडफिल्ड निकै बलियो भएको मानिन्छ। युरोपमा खेल्दै आएका कप्तान माकोटो हासिबी, केसुकी होन्डा, सिन्जी कागवाका मिडफिल्डमा प्रभावशाली खेलाडी हुन्। यद्दपी अन्य क्षेत्रमा टोली केही कमजोर मानिन्छ।
प्रशिक्षक – मिगुयल हेरेरा
फिफा वरियताको २० औं स्थानको मेक्सिको लगातार छैटौं पटक विश्वकपका लागि छनोट हुन सफल राष्ट्र हो। तर ब्राजिलका लागि स्थान सुरक्षित गर्न टोलीले प्ले अफ सम्म कुर्नपरेको थियो। न्यूजिल्यान्डलाई हराउँदै विश्वकप यात्रा सुनिश्चित गरेको टोलीको छनोट चरणको प्रदर्शन भने उतारचढावपूर्ण रह्यो। कनकाकाफ समूह चरणका दुई खेलमात्र जितेको मेक्सिकोले १० खेलमा ७ गोल गरेको थियो। हालका प्रशिक्षक हेरेराले नेतृत्व गर्नुअघि तीनवटा प्रशिक्षक परिवर्तन भैसकेका थिए। गत बर्ष लन्डन ओलम्पिकमा मेक्सिकोलाई स्वर्ण पदक दिलाएपछि मेक्सिको हरेरामाथि निकै विश्वस्त छ। क्लब अमेरिकाका पूर्व प्रशिक्षक हेरेराले न्युजिल्यान्डविरुद्धको प्ले अफमा घरेलु फुटबल व्यस्त खेलाडीलाई उतारेका थिए। यद्दपी युरोपमा खेलिरहेका जाभियर हर्नान्डेज, गियोभानी डोस सान्तोषलाई समेत टोलीमा समेटेका छन्। हेरेराले रियाल सोसिडाडका कार्लोस भेलालाई पनि टोलीमा आउन प्रयास गर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रशिक्षक – लोयुस भान गाल
साविक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सको छनोट चरण सुखद रह्यो। समूह चरणमा मात्र २ अंक गुमाउँदै ३४ गोल गर्न सफल प्रशिक्षक भान गालका लागि सुखद अनुभव थियो। किन की उनले दोस्रो पटक टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। २००२ को विश्वकपमा छनोट नभएपछि भान गाल टोलीबाट अलग्गिएका थिए। अर्को बर्ष ब्राजिलमा हुने विश्वकपमा फिफा वरियताको नवौं स्थानमा रहेको नेदरल्यान्ड्सलाई पनि दाबेदार मध्ये एकका रुपमा हेरिउको छ। भान गालसँग थ्रुपै स्तरीय खेलाडी छन्। रोविन भान पर्सी, आर्जेन रोवेन, वेस्ली स्नाइडर अहिले पनि टोलीमा छन् भने केभिन स्ट्रोटम्यान जस्ता प्रतिभावान खेलाडी पनि समेटिएका छन्।
प्रशिक्षक – स्टेफन केइसी
अफ्रिकाबाट विश्वकपका लागि सहजै छनोट हुने राष्ट्रका रुपमा नाइजेरियालाई हेरिएको थियो। गत बर्ष टोलीले अफ्रिका कप अफ नेसन्सको जितेका कारण पनि नाइजेरियाले समूह चरण सजिलै पार गर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर टोलीले छनोट हुनका लागि प्ले अफ सम्म कुर्नपर्‍यो। इथोपियालाई प्ले अफमा हराउँदै नाइजेरियाले ब्राजिल विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो। प्रशिक्षक केइसीले खेलाडीका रुपमा १९९४ मा कप अफ नेसन्स जितेका थिए। कैयौं महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको कठिन समयमा पनि केइसीले टोलीलाई सम्हालेका थिए।
फिफा वरियतको ३६ औं स्थानमा रहेको टोलीसँग प्रिमियरसिपको अनुभव भएका जोन ओबी मिकेल र भिक्टोर मोसेस छन्। नाइजेरियाले १९९४ र १९९८ मा जस्तै आउने विश्वकपमा पनि अन्तिम १६ लाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्नेछ।
प्रशिक्षक – पाउलो बेन्टो
पोर्चुगलले लगातार तेस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट हुन प्ले अफ सम्म कुर्न परेको थियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उच्च प्रदर्शनबाट प्रेरित पोर्चुगलले प्ले अफमा स्विडेनलाई हराउँदै विश्वकपको यात्रा तय गरेको थियो। सम्भवतः विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी मानिने रोनाल्डोको साथ रहेपनि प्रशिक्षक बन्टोसँग बलियो टोली भने छैन्। ब्राजिलमा पनि टोलीको कमजोर प्रदर्शन उजागर हुने अनुमान गरिएको छ। यद्दपी अघिल्लो विश्वकप बाहेक ठुला प्रतियोगितामा पोर्चुगलको प्रदर्शन सम्मानजनक नै रहेको थियो। फिफा वरियताको पाँचौ टोली पोर्चुगल २००६ को विश्वकप र २०१२ को युरोपकपमा सेमिफाइनल सम्म पुगेको थियो।
प्रशिक्षक– फावियो कापेलो
सन् २००२ पछि रसिया पहिलो पटक विश्वकपका लागि छनोट हुन सफल भएको थियो। पोर्चुगल सम्मिलित समूहको शीर्षस्थानमा रहँदै रसियाले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित पारेको थियो। सोभियत संघबाट टुक्रिएपछि रसियाले फुटबलमा कति प्रगति गरेको छ भन्ने देखाउन प्रशिक्षक कापेलाले सक्दो प्रयास गर्नेछन्। कापेलोको प्रशिक्षणमा इङ्ल्यान्डले पछिल्लो विश्वकपमा अन्तिम १६ सम्मको यात्रा तय गरेको थियो। २०१८ को विश्वकप आयोजक रसियाले कापेलोसँगको सम्झौता जारी राख्न समेत प्रयास गरिरहेको छ। विश्व वरियताको २२ औं स्थानमा रहेको रसियन टोलीको रक्षापक्तिलाई निकै बलियो मानिन्छ। गोलकिपर इगोर अकिनफिव, सेर्गेइ इग्नाहेभिच र अलेक्सी बेरेजुट्स्की टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडी हुन्।
प्रशिक्षक – भिसेन्टे डेल बोस्की
फिफा वरियताको शीर्ष टोली स्पेन विश्वकपको साविक विजेताका साथै पछिल्लो दुई पटकको युरोपियन च्याम्पियन टोली हो। विश्वकप खेल्न अर्को बर्ष ब्राजिल पुग्दा स्पेन सबैभन्दा बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिनेछ। यद्दपी यसै बर्ष आयोजक ब्राजिलसँग अन्तरमहादेशिय कपमा ३–० को हारपछि भने स्पेन पक्कै झस्किएको हुनुपर्छ। तरपनि पछिल्ला केही बर्ष उच्च प्रदर्शन गरिरहेका जाभी हर्नान्डेड टोलीका मुख्य खेलाडी हुन्। गोलकिपर एवंम् कप्तान इकर कासियास रियाल मड्रिडको पहिलो रोजाइमा पर्न असफल भएपनि स्पेनमा फर्ममा रहेको थ्रुपै खेलाडी छन्। सर्जिलो रामोस, आन्द्रेस इनियस्टा, सर्जियो बुस्केट्सजस्ता खेलाडी त्यसका केही उदाहरण हुन्। त्यसबाहेक पनि डेल बोस्कीले केही नयाँ खेलाडीलाई समेत टोलीमा मौका दिने सम्भावना छ।
प्रशिक्षक – होङ म्योङ बो
दक्षिण कोरियाको विश्वकप यात्रा सहज रहने। गोलअन्तरमा उज्वेकिस्तानलाई पछि पार्दै फिफा वरियताको ५४ औं स्थानको टोली लगातार आठौं पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको थियो। होङ म्योङ बोले स्वदेशी टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका छन्। घरेलु मैदानमा भएको २००२ को विश्वकपमा दक्षिण कोरियाले कास्य पदक जित्दा बो टोलीका सदस्य थिए। उनी देशका लागि सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने खेलाडी हुन्। चोइ काङ हिको सट्टा पछिल्लो जुनमा उनले कोरियाली टोलीको कमान सम्हालेका थिए। बोले घरेलु फुटबलको अनुभव लिइरहेका खेलाडीलाई ब्राजिलमा मौका दिने छन्। युरोपमा खेल्दै आएका आएका सन हियुङ मिन टोलीका स्टार खेलाडी हुन्। अघिल्लो विश्वकपमा जस्तै दक्षिण कोरियाले अन्तिम १६ सम्मको यात्रा तय गर्ने आशा गरिएको छ।
प्रशिक्षक – ओटमार हेट्जफिल्ड
सम्भवत युरोको सबैभन्दा कमजोर समूहबाट स्वीट्जरल्यान्ड विश्वकपका लागि छनोट भएको थियो। साइप्रस र आइसल्यान्डसँग बराबरी खेलेपनि स्वीस टोली समूहको विजेता बन्न सपल भएको थियो। टोली दोस्रो पटक विश्वकपका लागि छनोट भएको हो। अहिलेकै प्रशिक्षक हेट्जफिल्डको नेतृत्वमा अघिल्लो विश्वकपमा पनि छनोट भएको थियो। त्यहाँ पहिलो खेलमा स्पेनलाई हराएर सनसनी मच्चाएपनि अन्ततः टोली समूह चरणबाटै बाहिरीएको थियो। फिफा वरियताको आठौं स्थानमा रहेको स्विस टोली सहज समूहमा परे नकआउट चरणमा पुग्ने आशा गरिएको छ।
प्रशिक्षक– योर्गान क्लिन्सम्यान १४
पश्चिम जर्मनीको टोलीबाट १९९० मा विश्वकप जितेका क्लिन्सम्यानले दुवै जर्मनीको एकिइकरणपछि २००६ मा घरेलु मैदानमा विश्वकप हुँदा प्रशिक्षकका रुपमा आफ्नो देशलाई सेमिफाइनल पुर्‍याएका थिए। अहिले लगातार सातौं विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको अमेरिकालाई नेतृत्वको जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ। कन्काकाफ क्षेत्रको छनोट प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहँदै अमेरिका विश्वकपका लागि छानिएको थियो। टोलीले यो वर्षको गोल्डकप पनि जितेको थियो। २००२ मा क्वाटर फाइनल पुग्नु विश्वकपमा अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। अहिले क्लिन्सम्यानसामु विश्व वरियताक्रमको १४ औं स्थानमा रहेको टोलीलाई तीन संस्करणअघिको त्यही सफलताको नजिक पुर्‍याउनु हुनेछ। युरोपमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने टिम हवार्ड, माइकल ब्राडली र जेर्माइन जोन्स क्लिन्सम्यानको टोलीमा मुख्य खेलाडी हुनेछन्।
प्रशिक्षक– ओस्कार टाबारेज ६
ब्राजिलमा हुने विश्वकप उरुग्वेका लागि विशेष हुनेछ। १९५० मा माराकानामा सम्पन्न फाइनलमा घरेलु ब्राजिललाई हराउँदै उरुग्वेले विश्वकप उपाधि उचालेको थियो। उरुग्वेको वर्तमान टोली त्यो ऐतिहासिक उपलब्धीको छेउ पुग्ने सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ। तथापि, दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न २०१० को विश्वकपमा उरुग्वे सेमिफाइनलसम्म पुगेको थियो। त्यसको लगत्तै अर्को वर्ष अर्जेन्टिनामा टोलीले कोपा अमेरिका कपको उपाधि उचालेको थियो। तर, दक्षिण अमेरिकाबाट विश्वकपमा छनोट हुन भने टोलीले निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो। उरुग्वे दक्षिण अमेरिकाको छनोट प्रतियोगितामा पाँचौं भएपछि ब्राजिलको टिकट काट्न प्लेअफमा धकेलिएको थियो। जहाँ फिफा विश्व वरियताक्रमको छैटौं स्थानमा रहेको टाबारेजको टोलीले लुइस स्वारेज र इडिन्सन काभानीको प्रेरणामा दुवै लेगमा एसियाली प्रतिद्वन्द्वी जोर्डनलाई निराश पार्दै विश्वकपको अन्तिम ३२ मा नाम लेखाएको थियो।
Previous: मंगोलियन हर्ट लाइभ इन अष्ट्रेलिया
Next: साताको साहित्य पुरस्कार कवि रमेश सायनलाई